(P&F) Point and Figure trading - Reg Trading
Oku kulandelayo kuya kukunika isiseko esomeleleyo sokuqhubeka nokufunda imigaqo emibini ebalulekileyo yetshathi ye-P & F: amanqanaba enkxaso kunye nenqanaba lokumelana. Kuya kufuneka ukhumbule ukuba zombini inkxaso kunye nokumelana kubonisiwe kwimigca ethe tyaba kunye neendlela ezihamba ngazo zimelwe ngee-angles ezingama-45.
Inqanaba lenkxaso linqanaba apho abatyali mali kunye nabarhwebi ngokufanayo bakholelwa ukuba amaxabiso aya kuqala ukunyuka aphezulu emva kokubetha uphawu lwenkxaso. Jonga ezintathu ze-O kumzekelo ongentla ukubona ukuba kuthetha ntoni oku. Umqolo othe tye we-O yeyona nto uyikhangelayo xa ungena kwindawo yokubuyela umva kwimeko kunye nokuqala ukuqala.
Umqolo othe tyaba wamanqaku e-X amanqanaba oxhathiso ekufuneka uwakhangele kufundo lweetshathi lwe-P & F. Uphononongo lwee-trendline lubonakalisile ukuba ikhefu ngokwamanqanaba okumelana ngokubanzi kwenzeka nge-gusto enkulu-oko kukuthi, ngomthamo omkhulu kunye nokunyuka okukhawulezayo kwexabiso lesitokhwe.
Iimpawu zithatha ixesha elide ukubuyela umva, ke abarhwebi kufuneka bakhumbule ukuba i-P & F charting yenzelwe abatyali mali bexesha elide kwaye ayinaxabiso kwaphela kumrhwebi wexesha elifutshane. Ngokusebenzisa inqaku kunye nomzobo wetshathi ukufumanisa imeko yexabiso lilonke, abatyali mali bezobuchwephesha banokuthatha izikhundla ezinamathuba amahle okufumana inzuzo.
Olu luphononongo olusisiseko lweetshathi ze-P & F. Eyona ncwadi ibalaseleyo ebhalwayo ngalo mbandela yi “Point and Figure Charting” ebhalwe ngu Thomas Dorsey. Le ncwadi iyimfuneko kubo bonke abo bafuna ukuqonda okugqibeleleyo ngale ndlela idumileyo yokutshata. Ukusukela ekungenisweni kweetshathi ze-P & F, bona
Next Post (P&F) نۇقتا ۋە...
Previous Post (P & F) פונט און...